Cudurka Jadeecada Oo Halis weyn ku haya Shacabka Wadanka Mareykanka.
Wednesday April 24, 2019 - 19:26:21 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay 20 sanadood kadib boqolaal qof American ah ayuu halis ku hayaa cudurka laayaank ah ee loo yaqaan jadeecada.
Wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in cudurka Jadeecada uu si xowlli ah ugusii dhax faafayo inkabadan 22 gobol oo katirsan kontonka gobol ee wadankaasi ka koobanyahay.
Laamaha caafimaadka dalka Mareykanka ayaa sheegay in isbuucan gudihiisa ladiiwaan geliyay illaa 71 xaaladood oo hor leh taas oo ka dhigan in 13% dadka Mareykanka ay wajahayaan cudurka Jadeecada muddo ku siman 20 sanadood.
Xarunta Mareykanka ee ladagaallanka Cudurrada ayaa xaqiijisay in 626 xaaladood lagasoo calaamadeeyay gobollada wadanka Mareykanka walina ay jirto cabsi laga qabo in cudurku uu soo rito dad hor leh.
Magaalada New York ee dalka Mareykanka waa meesha ugu badan ee lagasoo diiwaan geliyay Kiisaska cudurka Jadeecada, arrintan ayaa shacabka Mareykanka u ah dib udhac weyn xilli Trump uu meesha ka saaray Adeeggii caafimaad ee [Obama Care].
Koowdii bishii Janaayo ee sanaddan 2019 ayey aheyd markii gudaha Mareykanka lagasoo calaamadeeyay cudurka Jadeecada.
Hay'adda caafimaadka Q.Midoobe ee WHO ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in wadamada dhaca qaaradda Laatiin America iyo waqooyiga qaaradda America laga helay 112,163 xaaladood oo cudurka jadeecada ah dhammaan xaaladahan cudurka ee lasoo gudbiyay waa afarta bilood ee ugu horraysa sanadda 2019.